Bayern Oo Diyaarisay Lambarka Sane, Chelsea Oo Dhibaato Suuqa Ah Ku Jirta, Arsenal Oo Weerar Ku Ah Atletico Iyo Wararkii Ugu Dambeeyey Suuqa - Gool24.Net
Bayern Oo Diyaarisay Lambarka Sane, Chelsea Oo Dhibaato Suuqa Ah Ku Jirta, Arsenal Oo Weerar Ku Ah Atletico Iyo Wararkii Ugu Dambeeyey Suuqa
21/05/2020 Abdiwahab A. Abeye
Muddo kooban ayaa ka hadhay waqtiga uu furmayo suuqa iibka ciyaartoyga ee xagaaga oo ku beegan horraanta bisha June, laakiin fayraska Korona ayaa laga yaabaa in sannadkan uu isbeddel ku keeno.
Inkasta oo uu hadda xidhan yahay suuqu oo aanu wali furmin, waxa kooxaha waaweyn ee Yurub ay kala jiidanayaan laacibiinta heshiisyadoodu dhamaanayaan ee sida bilaashka ah ku baxaya iyo kuwo kale oo ay u hurayaan lacago badan si ay iskugu xoojiyaan xili ciyaareedka dambe.
Warbaahinta dunida gaar ahaan wargeysyada ayaa waxay si maalin leh usoo bandhigaan dhaqdhaqaaqyada ugu dambeeyey ee kooxaha, ciyaartoyda ay doonayaan iyo waxyaabaha laga yaabo inay dhacaan.
Sidii aad nooga barateen, waxa aanu halkan idiinku soo gudbinaynaa wararkii ugu dambeeyey ee suuqa iibka ciyaartoyga ee ay wargeysyada waaweyn ee Yurub qoreen maanta oo Khamiis ah:
Kooxda Bayern Munich ayaa meel u dhigtay weeraryahanka Manchester City ee Leroy Sane funaanadda No.10 oo uu xidhan doono xili ciyaareedka dambe. (Mirror)
Munich waxay ka doonaysaa Sane inuu sameeyo mushahar dhimis boqoliiba 30 ah ka hor inta aan la dhamaystirin heshiiskiisa. (Bild)
Chelsea waxay ku dhibaatoonaysaa sidii ay iskaga diri lahayd Victor Moses kaddib markii ay Inter Milan diiday inay bixiso £10.75 milyan oo ay Blues dalbatay in laga siisto laacibka reer Nigeria ee garabka ka ciyaara. (Sun)
Wakiilka Jorginho ayaa sheegay in kubbad-sameeyaha Talyaaniga ah uu ku faraxsan yahay Chelsea, waxaanu hoosta ka xarriiqay in aanay Juventus dalab kasoo gudbinin 28 jirkan. (Metro)
Tababaraha Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer waxa uu doonayaa inuu sii haysto difaaca 21 jirka ah ee Digo Dalot oo ay xiisaynayaan Barcelona iyo Paris St-Germain. (ESPN)
Liverpool waxay diyaar u tahay inay iibiso saddex ka mid ah ciyaartoygeeda, si lacagta ay ka hesho ay ugu soo iibsato weeraryahanka RB Leipzing iyo xulka Germany ee Timo Werner oo qiimihiisu yahay £52 milyan.
Manchester United waxay jeclaan lahayd inay sii haysato weeraryahanka 30 jirka ah ee Odion Ighalo oo ay amaah kaga soo qaadatay Shanghai Shenhua, laakiin wax walaac ah ma qabto haddii uu ka tago sababtoo ah Marcus Rashford ayaa usoo laabtay. (Sky Sports)
Arsenal waxay damacsan tahay in Atletico Madrid ay kala beddeshaan weeraryahanka reer France ee Alexandre Lacazette oo 28 jir ah iyo khadka dhexe ee reer France ee Thomas Lemar oo 24 jir ah. (AS)
PSG waxa ka dhamaaday xiisihii ay u haysay difaaca Napoli ee Kalidou Koulibaly oo ah 28 qiimihiisu yahay 70 milyan oo Euro, waxaana hadda kooxda ugu horreysa tartankiisa ah Manchester United. (Le Parisien)
Wakiilka Gareth Bale ayaa dafiray wararka sheegaya in laacibka Real Madrid iyo xulka Wales ee 30 jirka ah ay dalab kasoo gudbisay koox ka dhisan waddanka Maraykanka oo la rumaysan yahay inay tahay Inter Miami oo uu leeyahay David Beckham. (ESPN Deportes)
Laacibka Barcelona iyo xulka Chile khadka dhexe uga ciyaara ee Arturo Vidal oo 32 jir, qayb kama noqon doono heshiiska ay kooxda reer Spain ku doonayso weeraryahanka Inter Milan ee Lautaro Martinez oo 22 jir ah. (Marca)